सुगुरको मासु खानेले यति कुरामा सचेत हुनै पर्छ है - Sakaratmak Soch
सुगुरको मासु खानेले यति कुरामा सचेत हुनै पर्छ है
मासु सेवन केहि फाइदाजनक छ । मासुमा प्रोटिन हुन्छ, जसले मसल्स निर्माणमा सहयोग गर्छ । यसका साथै मासुमा केहि मिनरल्स पनि मिल्छ, जो मानव शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ । तर, मासुको फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा छ । खासगरी रातो मासु (रेड मिट)को सेवनले उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलोस्टोर बढाउँछ । यसका सथै मासुमा वोसोकामात्रा पनि बढी हुन्छ, जसले मोटोपन बढाउने नै भयो । त्यसैले कुनैपनि रोगमा चिकित्सकहरुले सर्तक गराउँछन्, ‘रेड मिट नखानु होला ।’
कति हानिकारक सुँगुरको मासु : धेरै रोगमा खसीको मासु बर्जित छ । तर, ह्वाइट मिट अर्थात सुँगुरको मासु -पोर्क) पनि खान लायकको भने छैन । हालै भएको एक अध्ययनले यस्तै तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नियमित रुपले सुँगुरको मासु सेवन गर्नु निकै हानिकारक हुने त्यसमा उल्लेख छ ।
किन हानिकारक ? : – भाइरलको कारणले हुने हेपटाइटिस ए र बिको रोगी त हामीले देखेकै छौ । यसैगरी हेपटाइटिस ई पनि हुन्छ । यसमा मुटु सुन्निने, मांसपेशीको बिमार, रक्त बिकार, जोर्नीको दुखाई जस्ता लक्षण देखापर्छ । यो रोग खासगरी गर्भवतीका लागि खतरनाक हुनसक्छ । अध्ययनबाट थाहा भएको छ कि, सुँगुरको मासुबाट हेपटाइटिस ई भाइरस सर्न सक्छ । किनभने उक्त मासुमा हेपटाइटिस ईको भाइरस अधिक हुन्छ ।
– शोधकर्ताका अनुसार सुँगुरको मासुले मल्टीपल स्केलेरोसिस जस्ता भयांकर बिमारको खतरा बढाउँछ । मल्टीपल स्केलेरोसिस एक गंभिर अटोइम्युन रोग हो, जसले शरीरका भित्री अंगहरुमा क्षति पुर्‍याउँछ । दृष्टिमा समस्या हुनु, मांसपेशी कठोर हुनु, संवेदना कम हुनु आदि यसका लक्षण हुन् । यसमा पथोगेन्स हुन्छ, जसले स्नायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ । त्यती मात्र कहाँ हो र ? सुँगुरको मासुमा अघुलनसिल बोसो हुन्छ, जो लिभर क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ ।
जिन्दगीको १० प्रेरक भनाईहरु
कतै तपाई पनि देखावटी माया प्रेम त गरिरहनु भएको छैन ? कसरी थाहा पाउने